Ity tranokala ity (antsoina amin'ireo "fepetra fampiasana" ireo ho tranokala) dia an'ny Released Pty Ltd, izay antsoina amin'ity Politika Cookie ity ho "isika", "isika", "nay" ary ireo endrika gramatika mitovy.
Ny politikan'ny Cookie dia manazava ny atao hoe cookies, ny fomba ampiasantsika cookies, ny fomba ampiasain'ny mpiara-miombon'antoka fahatelo amin'ny tranokalanay ary ny safidinao momba ny cookies ho an'ny Sehatra Fitantanana ny fihaonanay - mForce365.
Ny fampahalalana ankapobeny momba ny fitsidihana ny tranokalanay dia angonin'ireo mpizara solosainay, miaraka amin'ny rakitra kely "cookies" izay afindran'ny tranokalanay amin'ny kapila mafy an'ny solosainao amin'ny alàlan'ny tranokalanao (raha avelanao ny fandefasana "cookies"). Ny "cookies" dia ampiasaina hanarahana ny lamin'ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny fampahafantarana anay hoe pejy inona ao amin'ny tranokalanay no tsidihina, amin'ny filaharana sy ny impiry ary ny tranonkala teo aloha nitsidika ary koa ny fanodinana ireo zavatra nofidinao raha mividy ianao. avy amin'ny tranokalanay. Ny fampahalalana tsy mitonona anarana izay angoninay sy nodinihinay amin'ny fampahalalana tsy momba ny tena manokana araka ny voalaza ao amin'ny Lalàna momba ny fiainana manokana.
Nahoana isika no mampiasa “cookies” sy mampiasa teknolojia fanaraha-maso amin'ny Internet?
Rehefa miditra amin'ny tranokalanay ianao, dia mety ho sintonin'ny mpitety tranonkalanao ny rakitra kely misy laharana famantarana tokana (ID) ary tehirizina ao amin'ny cache an'ny solosainao. Ny tanjon'ny fandefasana ireo rakitra ireo miaraka amin'ny laharan'ny ID tokana dia ny ahafahan'ny tranokalanay mahafantatra ny solosainao rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao. Ny “cookies” izay zaraina amin'ny solosainao dia tsy azo ampiasaina hitadiavana fampahalalana manokana toy ny anaranao, adiresinao na adiresy mailaka fa ny solosainao ihany no ahafantarana ny tranokalanay rehefa mitsidika anay ianao.
Azontsika atao koa ny mampiditra ny adiresin'ny Internet protocol (adiresy IP) an'ireo mpitsidika ao amin'ny tranokalantsika mba ahafahantsika mamantatra ireo firenena misy ny solosaina.
Manangona vaovao amin'ny fampiasana "cookies" sy teknolojia fanaraha-maso hafa izahay noho ireto antony manaraka ireto:
hanampy anay hanara-maso ny fahombiazan'ny tranokalanay mba hanatsaranay ny fiasan'ny tranokala sy ny serivisy atolotray;
hanome tolotra manokana ho an'ny mpampiasa tsirairay amin'ny tranokalanay mba hanamora ny fitetezana azy ireo amin'ny alàlan'ny tranokalanay ary mahafa-po kokoa ny mpampiasa;
mivarotra dokam-barotra amin'ny Tranonkala mba handoavana ny sasany amin'ireo saran'ny fampandehanana ny Tranonkala sy hanatsarana ny votoaty ao amin'ny Tranonkala; SY
rehefa nahazo alalana avy amin'ny mpampiasa izahay, hivarotra ny serivisy omenay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka izay mifanaraka amin'ny zavatra takatsika fa tombontsoan'ny mpampiasa.
Na dia nanome alalana anay handefa mailaka ho anao aza ianao, dia afaka manapa-kevitra ny tsy handray mailaka fanampiny ianao amin'ny fotoana rehetra ary ho afaka "hijanona" amin'io serivisy io.
Ho fanampin'ny cookies manokana, dia mety hampiasa cookies avy amin'ny antoko fahatelo ihany koa izahay hitaterana ny antontan'isa momba ny fampiasana ny tranokala, handefasana dokambarotra amin'ny alàlan'ny tranokala, sy ny sisa.
Inona no safidinao momba ny cookies?
Raha tsy faly ianao amin'ny fandefasana cookie ho anao dia azonao atao ny mametraka ny navigateur anao handà cookies na misafidy ny hampitandrina anao ny solosainao isaky ny misy cookie alefa. Na izany aza, raha vonoinao ny cookies, dia mety tsy mandeha tsara ny serivisy sasany